नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : न्यूयोर्कको घटनाले नआत्तिनुहोला, नडराउनु होला ।
न्यूयोर्कको घटनाले नआत्तिनुहोला, नडराउनु होला ।
अमेरिकामा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरु !
न्यूयोर्कको घटनाले नआत्तिनुहोला, नडराउनु होला । न्यूयोर्कमा मृत्‍यु भएका भनिएका चारै जना नेपालीहरु सबैजनाको कोरोना भाइरसको कारण मृत्‍यु भएको होइन । यो बेला सँयम हुने, आत्मबल बलियो बनाउने, सरकार र आधिकारिक निकायहरुका सूचना र गाइडलाइन्स फलो गर्ने, चिकित्सकहरुको परामर्श लिने, सके सम्म सुरक्षित रहने उपायहरु अपनाउने बेला हो ।
अमेरिकामा अहिले यो बेला फ्लु हुने, रुघा खोँकी लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने बेला पनि हो । हामीलाई हल्का केही हुने बित्तिकै कोरोना भाईरस नै लागेछ कि भन्ने शँका र डर लाग्नु स्वभाबिकै हो तर धेरै अत्तालिने काम नगरौं ।
हामी नेपालीहरुले सानैमा नेपालमा गाउँ गाउँ देखी नगर सम्मका घुम्ती शिबिरहरुमा बिसिजी खोप लगाएका पनि छौं । अमेरिकी एउटा अनुसन्धानले बिसिजी खोप लगाएकाहरुमा कोरोना भाईरसको प्रभाब कम पर्ने आसयको रिपोर्ट सार्वजनिक भैसकेको छ । त्यस कारण धेरै चिन्ता लिने काम कसैले पनि नगरौं । कोरोना भाईरस लाग्दैमा सबै मरिन्छ भन्ने होइन । संसार भर हेर्नुस, दुई लाख साठी हजार भन्दा बढीलाई निको पनि भैसकेको छ । तर साबधानी अपनाउन कसैले नभुलौं ।
अमेरिकामा ३३ करोड जनसंख्या छ । दुई करोड भन्दा बढी गैर अमेरिकी नागरिक छन । त्यसैले केही मर्ने, प्रभाबित हुने संख्या जनसंख्या सँग पनि दाँजेर हेरौं । नेपाल मा पनि धुवाँ धुलो, फोहोर, उकाला ओराला हर चिज थेगेर आएका हामीलाई कोरोना भाईरसले सजिलै ढलाउन त कसरी सक्ला र होइन र ? हुन त हाम्रो चोला एक दिन मरेर जाने नै हो ढिलो चाँडो । तर हाम्रै थुप्रै नेपालीहरुले कोरोनासँग को लडाईं जितेर घर फर्किनुभएका कयौं उदाहरण छन । बुढापाकाले भनेको सम्झिउँ त पिठो नसकिएको भए मरिन्न । ढुक्क हुनुस् । त्यस माथि हामी पशुपतिनाथका भक्त । पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन । धन्यवाद ।
अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्च ( www.IAFAmerica.com )